Maaluumaad been abuur ah oo laga baahiyo Soomaalida Borlänge - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Boqolkii 50 Soomaalida Borlänge waa analfbet ayaa badaanaa Siiyaasiinta iyo shaqaaalaha dowladda hoose ku celcelinayeen marar badan. Laakiin baariyaan baa muujinaya in aysan waxbo ka jirin taas. Sawirle: Warsame Elmi/SR
Sohrab Fadai. Foto: Johannes Rosendahl.
Maaluumaad been abuur ah oo laga baahiyo Soomaalida Borlänge
La daabacay fredag 30 augusti 2013 kl 16.06
Shaqaalaha dowladda Hoose iyo siyaasiinta degmada Borlänge ayaa dhamaantood ku dooda in Soomaalida degmadas ay boqolkii 50 yahiin dad aan waxna qorin waxna aqrin. Laakiin warbaxin maanta la soo bandhigey ayaa muujisey in aysan arintan waxbo ka jirin. Sohrab Fadai oo asagu daraasad ku sameeyey arintan ayaa degmadas ku arkey keliya hal Soomaali oo aan waxna qorin waxna aqrin.
- Daraasadeena waxaan ku aragney hal qof keliya oo aan waxna qorin/aqrin. Wax caqli gal ah ma ahan in la yiraahdo Boqolkii 50 Soomaalida Borlänge waxna ma qoran mana aqriyaan, ayuu yeri Sohran Fadia.
Soomaalida Sohran Fadia uu darsey ayaa dhan 138 ruux oo ku nool magaaalada borlänge gobalka Dalarna. Boqolkii 36 kamid ah tacliintooda waxey gaarsiisan tahay heer dugsiga hoose/dhexe halka 41 ay gaarsiisan tahay heerka dugsiga sare iyadoo weliba boqolkii 22 tacliintooda gaarsiisantahay heer jaamacadeed. Waxuuse heley hal ruux oo aan waxna qorin waxna aqrin.
In macluumaad aysan waxbo ka jirin la baahiya waa wax laga xumaado ayuu yeri mar uu u waramayey laanta p4 Dalarna.
- Waayo taas waxey keeneysaa in dadkan loola dhaqmo si kale oo loo arko si kale ayada laga fiirinayo halkey ka soo jeedaan iyo sida ay u eg-yahiin
Daraasada sohrab Fadais waxaa ku cad in marka ay siyaasiinta is-ticmaalaya tirada ah boqolkii 50 ay tixraacaan shaqaalaha hey'adaha dowliga ah halka ayagana ay tixraacaan baarintaan sidiisaba wax ka jiraa uusan jirin .
- Waxey ahaan laheyd in arintaan laga dhigo qalad shaqo. In lacagta canshuurta dadweynaha la geliyo howl ku dhisan wax aan waxbo ka jirin iyo tirokoob hawada la soo qabsadey, lamo aqbali karo, ayuu yeri Sohrab Fadai
Xigasho: P4 Dalarna